ㆍISBN : 9788928240418
ㆍPáginas : 396
Ko tingawana sei zvokwadi yakavanzarikwa muTabhenakeri? Tinogona kunzwisisa nemazvo pamwe nekuziva mhinduro yemubvunzo uyu kuburikidza nekuziva evhangeri yemvura noMweya, inova ndiyo donzvo reTabhenakeri.
Wuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nemucheka wakarukwa zvakaisvonaka, izvo zvakaratidzwa pamukova wechivanze cheTabhenakeri, zvinotiratidza mabasa aJesu Kristu munguva yeTestamende Itsva awo akaponesa vanhu. Nenzira iyi, Shoko reTabhenakeri reTestamende Yakare uye neShoko reTestamende Itsva zvinodyidzana zvakanyanya, sezvakaita mucheka wakarukwa zvakaisvonaka. Asi irombo rakaipa kuti zvokwadi iyi yakanga yakavanzarikwa kwenguva refu kuvanhu vose vanotsvaga zvokwadi muchiKristu.
Achiuya panyika pano, Jesu Kristu akabhapatidzwa naJohane uye akadeura ropa rake paMuchinjikwa. Pasina kunzwisisa uye kutenda kuevhangeri yemvura noMweya, hakuna munhu angagona kuwana zvokwadi inoratidzwa muTabhenakeri. Tinofanira zvino kudzidza zvokwadi iyi yeTabhenakeri uye tigotenda kwairi. Tose tinofanira kuziva uye nekutenda kuzvokwadi yakaratidzwa pawuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nemucheka wakarukwa zvakaisvonaka pamukova wechivanze cheTabhenakeri.